Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): Two police officers were caught by the Northern Alliance
Two police officers were caught by the Northern Alliance
at 11/29/2016 11:08:00 AM
၂၀၁၆၊ ၁၁၊ ၂၈ ရက်​ည​နေ ၄ နာရီချိန်​တွင်​ ကွတ်​ခိုင်​နဲ့ နမ်​့ဖတ်​ကာကြား နမ်​့ဖလွန်​ရွာနားတွင်​ နမ်​့ဖတ်​ကာ​ကျေးရွာ ရဲစခန်​းမှ ဒုရဲအုပ်​တစ်​ဦးနဲ့ တပ်​ကြပ်​ကြီး တစ်​ဦးတို့ကို ​မြောက်​ပိုင်​းမဟာမိတ်​တပ်​မှ အရှင်​ဖမ်​းမိထားတယ်​လို့ သတင်​းရရှိပါသည်​။ အာ့​ကြောင်​ သက်​ဆိုင်​ရဲမိသားစုမှ အလွန်​းအမင်း​ စိုးရိမ်​​နေမည်​မှာ အ​သေအချာပင်​ဖြစ်​သည်​။ တိုင်​းရင်​းသား မဟာမိတ်​များသည်​ မြန်​မာ့တပ်​မ​တော်​လို စည်​းမဲ့ကမ်​းမဲ့ အကြမ်​းဖက်​ သတ်​ဖြတ်​​ အ​လောင်​းမီးရှို့ဖျောက်​ဖျက်​ ပြုမူကျင်​့ကြံ တတ်​သည်​မဟုတ်​။ ထို့​ကြောင်​့ စိုးရိမ်​စရာ မလို မကြာခင်​တွင်​ ပြန်​လည်​လွှတ်​​မြောက်​လာမည်​မှာ မလွဲ​ပေ။
On November 28, 2016, two police officers were caught by the Northern Alliance on the road Kutkai to Nampaka, near Namphalun. The families of those officers could be so woried now. But according to the local native civillians' experiences, those officers will be released very soon by the Alliance, not like the Myanma Tatmataw who used to kill all the captives brutally.
by sinli uma